मूल्य समायोजनपछि नेपाल बैंकको सेयरभाउ कति? Bizshala -
चीनमा जन्मदर सन् १९४९ यताकै न्यून, जनसंख्या बढाउने नीति असफल बन्दै
नेप्सेको चार्टमा बन्यो ‘ड्रागन फ्लाई डोजी’, बजार अधिक बुलिस हुनसक्ने
मूल्य समायोजनपछि नेपाल बैंकको सेयरभाउ कति?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता नेपाल बैंकको ३७८.६८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ४३१.७० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नेपाल बैंकको सेयर कारोबारमा आउनेछ।
लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि बैंकले आज मंसिर २१ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ हिजो मंसिर २० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो बैंकको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य भएका छन्।
बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा १४ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र ३ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश (करसहित) रहेका छन्।
प्रस्तावित लाभांश बैंकको आउँदो पुस २ गते हुने ६२ औँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
nepal bank limited price adjustment
नेपाल बंगलादेश बैंकको कामु सीईओको जिम्मेवारी भुपेन्द्र पाण्डेलाई
एनआईसी एशिया लघुवित्तद्वारा बीमा दाबी रकम हस्तान्तरण
राष्ट्र बैंकद्वारा ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८’ जारी, यस्ता छन् लक्ष्य र उद्देश्य
पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ८७ अर्बले बढ्यो, रु. ५९ अर्ब कर्जा परिचालन
नेप्सेको चार्टमा बन्यो ‘ड्रागन फ्लाई डोजी’, बजार अधिक बुलिस
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि...
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । लगातार बढ्दो क्रममा रहेको नेपाली...
इन्ट्राडे करेक्सनमै सम्हालियो सेयर बजार, नेप्सेमा दोहोरो
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि...
नेप्सेमा थपियो १.७० करोड बढी कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज एकैदिन १ करोड ७० लाख...
आरएसडीसी लघुवित्तको सेयर रजिस्ट्रारमा बीओके क्यापिटल
काठमाण्डौ । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर...
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि...
एभरेष्ट बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुला, कति पाइन्छ
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आज माघ ३...
बजार किन रकेटको गतिमा बढिरहेको छ ? यस्ता छन् कारण
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजार अहिले रकेटको गतिमा...